Wararka - Qeybaha Nidaamka Korontada ee Ku Shaqeysa Qoraxda
Nidaamka korontada ku shaqeeya ileyska qorraxda oo dhameystiran wuxuu u baahan yahay qaybo ka kooban soosaarka korantada, awoodna ugu beddelaya mid is bedbeddela oo ay isticmaali karaan qalabka guryaha, keydinta korantada xad-dhaafka ah iyo ilaalinta nabadgelyada.
Qalabka qoraxda ayaa ah qaybta ugu caansan ee nidaamka korantada qorraxda ee la deggan yahay. Qalabka qoraxda waxaa lagu dhejiyaa banaanka guriga, caadi ahaan saqafka waxayna u rogaan iftiinka qoraxda koronto.
Saameynta sawir-qaadista waa habka loogu beddelayo iftiinka qoraxda koronto. Nidaamkani wuxuu siinayaa qalabka qoraxda magacooda kale, PV.
Qalabka qoraxda waxaa la siiyaa qiimeynno wax soo saar watts. Qiimeyntan ayaa ah tan ugu sareysa ee ay soo saaraan gudiga xaaladaha ku habboon. Wax soo saarkii guddi kasta wuxuu u dhexeeyaa 10 ilaa 300 watt, iyadoo 100 watt ay tahay isku xirnaan guud.
Racks Rakibidda sii kordhaya
Qalabka korontada ku shaqeeya ee loo yaqaan 'Solar banga' waxay ku biireen qabanqaabiyayaal waxaana si caadi ah loogu dhajiyaa mid ka mid ah seddexda dariiqo: saqafyada dushooda; on tiirarka qaababka taagan ee bilaashka ah; ama si toos ah dhulka.
Nidaamyada saqafka lagu fuulo ayaa ah kuwa ugu caansan waxaana looga baahan karaa qaynuunnada aagagga. Habkani waa bilic iyo waxtar. Cillada ugu weyn ee ka soo kordheysa saqafku waa dayactir. Saqafyada dhaadheer, nadiifinta barafka ama hagaajinta nidaamyada waxay noqon kartaa arrin. Guddiyadu badanaa uma baahna dayactir badan, hase yeeshe.
Joogitaan bilaash ah, iskudhaf tiirar leh ayaa lagu dejin karaa dherer ka dhigaya dayactirka mid sahlan. Faa'iidada dayactirka fudud waa in lagu miisaamaa booska dheeriga ah ee looga baahan yahay qabanqaabiyaasha.
Nidaamyada dhulku way hooseeyaan oo fudud yihiin, laakiin looma isticmaali karo meelaha barafka joogtada ahi ku ururaan. Boosku sidoo kale waa tixgelin la socota safafkan soo socda.
Iyadoo aan loo eegin meesha aad ku dhejiso dharka, jaranjarooyinka waa la hagaajiyaa ama la raad raacayaa. Fidyo go'an ayaa horay loogu sii dejiyey dhererka iyo xagasha mana dhaqaaqayaan. Maaddaama xagasha qorraxda ay isbeddeleyso sanadka oo dhan, dhererka iyo xagasha qalabka isdabajooga ee go'an ayaa ah isu-tanaasul ka ganacsanaya xagasha ugu fiican ee rakibidda rakhiis yar, dhib yar.
Iskuduwaha raadintu waxay la socdaan qorraxda. Raadinta qorraxdu waxay u guurtaa bari ilaa galbeed qorraxda waxayna hagaajineysaa xagalkooda si ay u ilaaliso sida ugu wanaagsan ee qorraxdu u socoto.
Kala-goynta 'Array DC'
Kala goynta 'Array DC' waxaa loo isticmaalaa in lagu kala gooyo qorraxda qorraxda guriga si loo dayactiro. Waxaa loo yaqaan 'DC disconnect' maxaa yeelay qoraxda qorraxdu waxay soo saartaa awoodda DC (toos u socota).
Qalabka korontada ku shaqeeya iyo baytariyada waxay soo saaraan awood DC (toos ah hadda). Qalabka guryaha caadiga ah waxay isticmaalaan AC (talantaalli ah hadda). Inverter wuxuu badalaa awooda DC ee ay soo saaraan baalayaasha qoraxda iyo baytariyada una beddelaa awoodda AC ee qalabka looga baahan yahay.
Nidaamyada tamarta qorraxda waxay soo saaraan koronto inta lagu jiro maalinta, marka qorraxdu soo baxeyso. Gurigaagu wuxuu dalbadaa koronto habeenkii iyo maalmaha daruuraha - marka qorraxdu aysan soo bixin. Si loo dheellitiro khaldanaantan, baytariyada ayaa lagu dari karaa nidaamka.
Mitaarka Awoodda, Meter-ga Waxtarka leh, Mitaarka Kilowatt
Nidaamyada ilaalinaya xarigga shabakadda korantada, mitirka korontada ayaa cabbiraya xaddiga awoodda laga isticmaalay shabakadda. Nidaamyada loogu talagalay in lagu iibiyo awoodda korontada, mitirka korontada ayaa sidoo kale cabbiraya xaddiga awoodda nidaamka qorraxda u dirayo shabakadda.
Nidaamyada aan ku xirnayn shabakadda korantada, matoor koronto-dhaliyaha ayaa loo adeegsadaa inuu ku bixiyo awoodda inta lagu jiro xilliyada soo-saarka nidaamka hooseeya ay ugu wacan tahay cimilada oo liidata ama baahida qoyska ee sare. Milkiilayaasha guryaha ee ka walaacsan saameynta deegaanka ee matoorrada ayaa rakibi kara koronto-dhaliye ku shaqeeya shidaal kale sida biodiesel, halkii uu ka ahaan lahaa shidaal.
Gudiga Jabiyaha, Gudiga AC, Gudiga Jabinta Wareega
Qaybta jabiyaha ayaa ah halka isha korontada ay ku xiran tahay wareegyada korantada ee gurigaaga. Wareeg waa waddo joogto ah oo silig isku xiran oo ku soo biiraya meelaha laga baxo iyo nalalka nidaamka korantada.
Wareeg kasta waxaa ku yaal bareeraha wareegga. Kala-gooyayaasha wareegga ayaa ka hortagaya qalabka wareegga inuu soo jiito koronto badan oo sababa khatar dab. Marka qalabka korontada ku shaqeeya wareegga uu dalbado koronto aad u badan, qalabka gooyaa wuu demin doonaa ama safri doonaa, isagoo carqaladeyn doona socodka korantada.
Xakamaynta xakamaynta - oo sidoo kale loo yaqaan jaangooyaha xukunka - wuxuu ilaaliyaa korantada ku habboon ee bateriga nidaamka.
Baytariyada waa la buuxin karaa, haddii la quudin karo danab joogto ah. Xakamaynta xakamaynta ayaa xakameysa danabka, ka hortagga xad-dhaafka iyo u oggolaanshaha lacag-bixinta marka loo baahdo. Dhammaan nidaamyadu ma laha baytariyada: wixii faahfaahin ah ee ku saabsan noocyada nidaamyada, eeg: 3 Noocyada Nidaamyada Awoodda Qorraxda ee Degaanka.